Matetika, matetika isika no sendra ilay toe-javatra fa vaky tsy nahy ny efijery finday, misy tranga sasany vakiny fitaratra, ny sasany tsy aseho ny efijery anatiny dia vaky ihany koa. Ny mpanamboatra antoko fahatelo amin'ny ankapobeny dia hanontany anao raha tianao ilay voalohany na ilay mahazatra. Gen ...
BPM Era Raha miresaka an'ity vokatra ity dia tsy maintsy nisy olona nahita izany. Raha ny tena izy, raha lazaina amin'ny fomba hentitra, ity vokatra ity dia tsy azo antsoina hoe finday. Ity fitaovana ity dia niseho tamin'ny taonjato faha-20, fony i Shanghai no tanàna voalohany nanokatra gara fitobiana. Taorian'izay dia niditra tamin'ny fomba ofisialy ny ...
Ny habeny dia làlana manan-danja hatrany amin'ny fampivoarana ny efijery finday, fa ny telefaona finday misy 6.5 santimetatra dia tsy mety amin'ny tanany iray. Noho izany, tsy sarotra ny manohy manitatra ny haben'ny efijery, fa ny ankamaroan'ny marika finday no nanome ...
Mamelà ahy ianao hametraka fanontaniana iray aminao matetika Ny telefaona finday matetika apetraka eo ambony latabatra rehefa tsy ampiasaina, apetrakao ve ny efijery sa hidina ny efijery? Fa fantatrao ve? Apetraho eo amin'ny birao ny telefaona finday miaraka amin'ny écran. Ho fantatrao ny antony aorian'ny famakianao ity manaraka ity? Tombony telo amin'ny ...